Nei Zvakaoma Kurega Fodya - 802Quits
Nei Zvakaoma Kurega Fodya
Ita Yako Yosiya Kuronga
Wana Rubatsiro Kurega
Mahara Mahara, Gum & Lozenges
Kunakidzwa Kurega Zvishandiso
Maitiro Ekutarisira Kushuva
Vermonters ZVikonzero zvekurega Nei Zvakaoma Kurega Fodya
ZVAKAWANDA PASI TSIKA
Kunyangwe iwe uchida kurega, pane zvikonzero zviviri zvinogona kuita kuti zviome kuti zviome:
1.Nekuti kushandisa fodya kunonyanya kupindwa muropa uye saka kwete hunhu chete, iwe une chaicho chinodikanwa chenicotine. Iwe unonzwa nicotine kubvisa kana iwe ukaenda kwenguva refu usina fodya kana e-mudzanga, kutsenga fodya, fodya kana vape. Muviri wako "unokuudza" izvi kana iwe uchinge uchinge uchishuva. Kuchiva kunopera kana iwe wagutsa kupindwa muropa nekuvhenekesa kana kushandisa imwe fodya. Gadzirira kugadzirisa izvi nekuwedzera zvigamba zvemahara, chingamu uye lozenges kana imwe mishonga yekurega kune yako yakagadzirirwa yakagadzirirwa kuronga.
2.Unogona kupindwa muropa nechiito chekushandisa fodya. Sezvo muviri wako waive uchikura kudiwa kwemuviri nicotine, wanga uchizvidzidzisa kuputa, kutsenga kana vape, uye uchizvirovedza kushandisa fodya mune dzakasiyana mamiriro. Aya mamiriro emamiriro ezvinhu anogona kukundwa kana iwe ukavagadzirira kare.
Kuziva maitiro aungade kubata nezvinokonzeresa seaya akanyorwa pazasi usati waatarisana nawo seasingaputi zvinokubatsira kuti uve nechivimbo.
Kunwa kofi kana doro
Munguva dzenhamo, nharo, kuora mwoyo kana chiitiko chisina kunaka
Kutyaira kana kukwira mumotokari
Kuva pedyo neshamwari, vatinoshanda navo uye nevamwe vanhu vanosvuta kana kushandisa zvimwe zvigadzirwa zvefodya
Ko zvakadii E-Cigareti?
E-midzanga iri kwete inogamuchirwa neU.S. Food and Drug Administration (FDA) semubatsiro wekurega kusvuta. E-midzanga uye mamwe emagetsi nicotine kutumira masystem (ENDS), anosanganisira emunhu vaporizers, vape peni, e-fodya, e-hookah uye vaping zvishandiso, zvinogona kufumura vashandisi kune mamwe akafanana mamwe machemichem ane chepfu anowanikwa muutsi hunopisa hwefodya.
Chii chinokonzera kuda kwako kushandisa fodya?
Nyora zvinokonzeresa pasi uye funga nezvenzira yakanakisa yekubata yega yega. Maitiro anogona kuve akareruka, sekudzivirira mamwe mamiriro ezvinhu, kuve nechaamu kana chihwitsi chakaomarara newe, kutsiva tii inopisa kana kutsenga pachando, kana kutora kufema kwakadzika.
Kunonoka imwe nzira. Sezvo iwe uri kugadzirira kurega kuputa, kuputika kana kushandisa imwe fodya, funga nezve nguva yaunowanzove uine yako yekutanga hutsi, kutsva kana vape yezuva uye edza kunonoka izvo kwenguva yakareba sezvaunogona. Kunyangwe kunonoka nenguva pfupi, uye kurebesa kuti zuva rega rega kusvika pazuva rako rekurega, kunogona kudzikisira zvishuwo. Kune matipi uye mazano ekuti ungagadzirise sei izvi zvinokonzeresa, tarisa Kuramba Kurega.
Ita Yako Yakasarudzika Kurega Chirongwa
Zvinongotora mineti kuti uite yako yakajairwa kurega chirongwa.
Gadzira Yangu Kuramba Kuronga>